FSX FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုအကူအညီ
မေးခွန်း FSX FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုအကူအညီ
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #52 by Dariussssss
သငျသညျပြဿနာများ, အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်သင်လျှင် FSX Simulator ကိုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းအချို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ဒီမှာ post ။ ဒါ့အပြင် FSX အတွက်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေနဲ့အမှားများကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: johnbrowning
7 လအတွင်း2days ago #1183 by flaps1262
ချစ်ခင်ရပါသောချင်းတို့, ငါ FSX ရေနွေးငွေ့ edition အတွက် A320 အတွက်ဆွဲယူတဲ့ minipanels တပ်ဆင်ရန်ပြဿနာများကိုကြုံတွေ့ခံစားကြပြီ။ ငါလေယာဉ်ပျံ panel က folder ထဲမှာ (အ panel.cpg မှာ) minipanel ညွှန်ကြားချက်ကိုအစားထိုးပေမယ့်မူရင်း minipanel မပြောင်းပါဘူး။ မဆိုအကူအညီတောင်း ??